Iinqwelo moya zaseBritane ezisuka eLondon Heathrow zize eSanta Lucia zibuye emva kweminyaka engaphezu kwama-30
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelo moya zaseBritane ezisuka eLondon Heathrow zize eSanta Lucia zibuye emva kweminyaka engaphezu kwama-30
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba eziNgcwele zikaSanta Lucia • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba ezahlukeneyo
Iinqwelo moya zaseBritane ezisuka eLondon Heathrow zibuyele eSaint Lucia Emva kweminyaka engaphezulu kwama-30
I-UK ihlala iyimakethi yesibini ngobukhulu kwezokhenketho eSaint Lucia.
I-TUI ibonelela ngeenkonzo zeveki ngeveki ku-Saint Lucia ovela eGatwick yaseLondon.
I-British Airways ineenqwelo-moya ezine ngeveki ukusuka eGatwick yaseLondon ukuya eSaint Lucia.
Inkonzo yeBritish Airways esuka eHeathrow izakuphela ngoSeptemba 4, 2021.
INgcwele uLucia yongeze elinye isango kwindawo ekuyiwa kuyo kunye nokuziswa kwakhona kwenkonzo nge Airways British ngaphandle kweLondon Heathrow (LHR) emva kweminyaka engaphezu kwama-30. I-Boeing 777 yehlile ngoMgqibelo, nge-24 kaJulayi, ngo-2021, malunga ne-5: 45 emva kwemini ngomthamo we-173, uninzi lwazo ziindwendwe.
Ukuphuma eGatwick (LGW), iSanta Lucia sele iyamkela inkonzo yeveki ngeTUI kunye neenqwelomoya ezi-4 ngeveki ngeBritish Airways. I-UK ixhaphake kakhulu kwintengiso yesibini yezokhenketho eSaint Lucia kwaye ukuza kuthi ga ngoku, unyaka ukuza kuthi ga ngoku ubonakalisa ukukhula kwe-4%.
Abasebenzi abali-13 abakhokelwa ngu-Captain-Peter Williams bajoyine amaGosa eSt.Lucia Tourism Authority (i-SLTA) ukuze bafumane icwecwe lesikhumbuzo elibonisa ii-twin iconons, iimarike ze-niche, kunye neepakeji zokwamkela ezimangazayo. Abakhweli ababini abanethamsanqa nabo banesiphiwo ekufikeni kwabo.
“Le nkonzo isandula ukwaziswa ngeveki isuka Heathrow iza ngexesha elifanelekileyo xa uSanta Lucia ehlaba inkxaso ngakumbi nangakumbi yehlobo esele linomdla, kunye nexesha elizayo lobusika. Oku kukwabonisa inkqubela eqhubekekayo ekubuyiseleni ngokupheleleyo icandelo lezokhenketho, ”utshilo uManejala woNxibelelwano loLuntu- uGeraine Georges.
Inkonzo yeBritish Airways esuka eHeathrow izakuphela ngoSeptemba 4, 2021, kwaye iingxoxo sele ziqhubeka ukuze kuqaliswe kwakhona kungekudala. I-airline nayo icwangciselwe ukunyusa ukuhamba ngenqwelomoya ngexesha lasebusika kunye neenqwelomoya mihla le ukusuka ngoNovemba ukuphuma eGatwick (LGW).